Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka shaqeeynaayo burburinta Soomaaliland (Caddeyn) | SHABAKADA GOBSOOR
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka shaqeeynaayo burburinta Soomaaliland (Caddeyn)
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka mid ah xildhibaanada BFS, iyo Maxamed Cusmaan Fadal ayaa ka shaqeeynaya in aay carqaladeeyaan doorashada la filaayo bishan Novembar in aay ka dhacdo gobolada Soomaaliland.
Dowladda Federaalka ah ayaa ku bixineyso adduun dhan seddex milyan oo doollar in aay rabshado ka dhacaan doorashooyinka Soomaaliland sida aay xog ku heshay Waacusub24.
Dowladda ayaa lacagtaas u dhiibtay Maxamed Cusmaan Fadal, waxaana kala shaqeynaayo xildhibaano dhowr ah oo uu horjooge u yahay Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo loo ballan qaaday in laga dhigi doono wasiir haddii uu ku guuleysto mashruucan lagu carqaleeynaayo doorashooyinka Soomaaliland. Xuseen Carab ayaa isku dayay in dowladdii hore ka noqdo wasiir taasoo uu ku fashilmay maadaama aanu ahayn shaqsi sumcad ku dhex leh dadka Soomaaliyeed.
Jeeg seddex malyan oo doollar ah oo laga qaaday bangiga dhexe 24 bishii sebtember 2017
Dowladda Federaalka ah ayaa ku fashilantay in aay burburiso maamulada GalMudug, Koofur Galbeed taasoo keentay in aay maamulada sameystaan dallad aay ku midoobeen oo horjeega ka yahay Cabdiwali Cali Gaas, hoggaamiyaha Puntland. Waxaa maalmo ka hor aay kala saxiixdeed Maamul Goboleedyada iyo Dowladda Federaalka ah in la joojiyo xagal daacada siyaasadeed ee lagu hayo maamulada federaalka ah oo u soo dhar dhigteen RW Xasan Cali Kheyr, Fahad Yaasin iyo Taabid in aay burburiyaan si markaas loo qabto doorashooyin aay ku soo baxaan shaqsiyaad aay iyaga raalli ka yihiin.
Mashuuraacaan ayaa waxaa maalgeliyay dowladda Qatar oo aay maamulada Puntland, Galmudug, Koofur Galbeed aay xiriirka ugu jareen dowladda Qatar iyagoo markaa la saftay wadamada Sucuudiga iyo Imaaraadka Carabta.